Ny fampiharana fako 8 sy fanarenana rakitra tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Fampiharana momba ny fako sy fisintomana rakitra 8 ho an'ny Android
Aaron Rivas | 24/04/2021 06:30 | Fampiharana Android, Fitaovana Android
Isan'andro isika dia mirona mamafa ireo singa marobe amin'ireo findaintsika Android, ary ireo zavatra izay hofafantsika indrindra indrindra dia ny sary sy sary. Tsy efa nitranga taminao ve fa diso ny famafana ny iray na mihoatra ny tianao, toy ireo sary nalainao tamin'io alina manokana io na tamin'ireo namana tsy hitanao hatry ny ela? Eny, ho an'ity Betsaka ny apps fanarenana fako sy fisie izay hatolotray amin'ity indray mitoraka ity.
Ireo rindranasa fanarenana fako sy fisie izay ho hitanao amin'ity fanangonana ity dia iray amin'ireo 8 tsara indrindra azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka mitantana sy mamerina sary sy sary, fa tsy izany ihany; ny sasany dia hamela anao hamerina amin'ny laoniny ireo rakitra toa audio, antontan-taratasy ary horonan-tsary.
Ao amin'ny lisitra asehonay etsy ambany, dia ho hitanao Fampiharana fako sy fisintomana rakitra 8 ho an'ny Android, araka ny voalazantsika tsara. Tsara ny manamarika izany maimaim-poana daholo ary ny be mpitia indrindra, miaraka amin'ny naoty tena tsara sy fisintomana marobe izay manohana ny fiasan-tsarany tena tsara. Mazava ho azy fa ny sasany dia mety mampiseho fisehoana fanampiny izay premium sy mandroso izay tsy azo idirana raha tsy mandoa vola.
1 Avereno indray ireo sary voafafa
3 Avereno indray ny sary voafafa avy amin'ny finday: Data Recovery
4 Fanarenana sary
5 Fampiharana fanarenana sary, fanarenana
6 Fanarenana Super Scan - Digger Deep Digger
7 Avereno indray ireo sary voafafa
8 Fanarenana horonan-tsary
Mba hanombohana ity fanangonana ity amin'ny tongotra ankavanana, dia manana ny sary voafafa voafafa izahay, fampiharana iray izay ahafahanao miditra mora foana amin'ireo rakitra voafafa, sary ary horonan-tsary ho fanarenana taty aoriana.
Mila mamela izany alalana ilaina fotsiny ianao hampiasa an'ity rindrambaiko ity amin'ny fahatsiarovan-tena ao anaty ny finday avo lenta sy ny karatra microSD hitadiavana rakitra, sary ary horonan-tsary nofafanao tsy nahy. Amin'izany dia azonao atao ny miditra sy mamerina azy ireo haingana, tsy misy fahasarotana. Andraso fotsiny ny hanaovana scann'ny finday ary hahitanao ireo rehetra izay voafafa taloha (Mety mila fotoana izany, miankina amin'ny haben'ny fisie voafafa sy ny isan'ny fisie).
Mora ampiasaina izy io. Rehefa vita ny scan dia aseho ireo lahatahiry maro miaraka amin'ireo fisie voafafa. Any ianao dia tsy maintsy misafidy ireo izay tianao haverina ary avy eo dia hiseho amin'ny toerana izay haseho ao amin'ilay fampiharana izany. Ny endrika sary sy sary tohana amin'ny famerenana amin'ny laoniny no be mpampiasa indrindra, jpg, jpeg ary png.
Dumpster Recycle Bin, iray amin'ireo fampiharana ilaina indrindra azonao atao amin'ny findainao Android anio, ampidinina ny tanana fa tsy maimaim-poana izany.
Raha iray amin'ireo mpampiasa ianao izay mazàna mamafa ny sary, sary ary karazana rakitra hafa toy ny horonan-tsary, ity rindranasa ity dia ho mpamonjy aina amin'ny fotoana mihoatra ny indray mandeha, satria mamonjy izay rehetra nesorinao tsy nahy izy ary avy eo mamerina azy mora foana sy haingana, tsy misy resaka lavitra intsony. Mamonjy kinova fampiharana taloha koa izy io, izay mahaliana, indrindra raha tsy mandeha tsara ny kinova vaovao iray.
Raha te hanana tahiry rahona ianao, ity rindrambaiko ity dia manolotra azy amin'ny vidiny ambany indrindra. Any no ahafahanao mitahiry izay rehetra tadiavinao tena azo antoka ary tsy misy dokam-barotra, tsy maintsy mametra ianao. Ho fanampin'izay, ny fampiharana dia misy amin'ny fiteny 14, anisan'izany, mazava ho azy, Espaniôla sy Anglisy.
Avereno indray ny sary voafafa avy amin'ny finday: Data Recovery
Nitranga tamin'ny mihoatra ny iray taminay izany, na dia manandrana manadio ny fahatsiarovan-tenantsika finday aza isika ary hamafa ireo rakitra, sary, horonan-tsary ary horonantsary izay tsy ilainay intsony, entana mihoatra ny iray no voafafa tsy nahy. Raha tsara vintana isika dia mahatsapa avy hatrany, ary ny manafoana ity hetsika ity dia ny fampiharana ity noforonina ity, mba hamerenana amin'ny laoniny ireo singa rehetra tsy tianay hamafana na, amin'ny tranga hafa, mamafa izahay fa te-ho sitrana.
Ny rakitra toa ny antontan-taratasy, sary, horonan-tsary ary audio dia azo averina haingana miaraka amin'ity fitaovana ity fa tsy misy fahasarotana maro. Tena mandaitraNy ampahany tsara indrindra dia ny hoe tsy mila finday finday Android hongotanao, zavatra ataon'ny sasany amin'ny karazany izany.
Fomba iray hafa ananan'ity fampiharana ity ny mamela anao hijery ireo rakitra voafafa ary hamafa azy ireo mandrakizay, mba hanampiana hanafaka bebe kokoa ny habaka fitehirizana anatiny ny finday, izay matetika mety hahatratra ny fetra.
Ity fitaovana ity koa dia manolotra fiasa fitahirizana rahona. Azonao atao ny mamorona backup amin'ny alalany izay ahafahanao mitahiry soa aman-tsara ny rakitrao manan-danja indrindra, toy ny sary, horonan-tsary ary maro hafa. Zavatra iray hafa atolotry ity fitaovana ity ny fanarenana sary sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny WhatsApp, fiasa tena ilaina satria miresaka momba ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka be mpampiasa indrindra eran-tany isika.
Developer: Tsindrio ny Apps
Raha mitady fako fanarenana fako sy antontan-taratasy tena misy fatra mahomby ianao, ity dia iray amin'ireo tsara indrindra, tsy misy isalasalana. Mihoatra ny 92% ny fahombiazany, ka saika tsy misy rakitra toa ny sary, sary ary horonan-tsary afa-mandositra avy amin'ilay scanner mahery.
Azonao atao ny mijery ireo sary sy sary azon'ity rindrambaiko ity, mba tsy hanao fahadisoana amin'ireo sary izay tsy tianao hamerina ary, ny mifanohitra amin'izay, amin'ireo izay tianao ho sitrana. Azonao atao ny mamonjy ny sitrana ao anaty fahatsiarovanao ao anaty smartphone na amin'ny fahatsiarovanao ivelany ny finday avo lenta (raha misy izany). Izy io koa dia manohana karazana rakitra maro toy ny JPG, JPEG, GIF, PNG, MP4, 3GP, TIFF, BMP, ary TIF.
Etsy ankilany, manana fampidinana mihoatra ny 5 tapitrisa izy, isa naoty kintana 4 ao amin'ny Play Store, ary fanehoan-kevitra sy fanamarihana tsara maro izay mahafeno azy ho iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy. Aza misalasala manandrana azy mba hahitana ny fomba fiasany.
Developer: Sary fanarenana, sitrana ny sary voafafa, 사진 복구
Fampiharana fanarenana sary, fanarenana
Zavatra tsy azon'ny rindranasa marobe amin'ity karazana ity atao ny mamerina fisie voafafa avy amin'ny karatra fahatsiarovana ivelany an'ny finday. Izany dia tafiditra ao anatin'ny fahaizanao, fa koa, araka ny ampoizinao, dia toy izany koa ny fanarenana ireo rakitra avy amin'ny fahatsiarovana anatiny an'ny telefaona.
Ny scanner fisie voafafa ity fampiharana ity dia tena mandaitra ary mampiseho aminao, amin'ny terminal ny fizotry ny fanitsiana, izay rehetra azonao averina amin'ny karatra fahatsiarovanao (tsy maninona izany raha namolavola azy) sy fahatsiarovana anatiny ny findainao haingana sy mora foana . Manolotra karazana hevitra roa: tsotra sy lalina. Mazava ho azy fa ity farany ity no mahomby indrindra amin'ny fahazoana rakitra efa voafafa teo aloha.
Manolotra fizarana tsotra koa izy io mampiseho fampahalalana momba ny smartphone toy ny haavon'ny batterie, ny fitadidy anatiny ampiasaina, ny toerana fitahirizana maimaimpoana, ny fampahalalana momba ny fampiasana ny memoam-pitaovana RAM an'ny finday sy ny anaran'ny modely an'ny finday.
Fanarenana Super Scan - Digger Deep Digger
Ity dia rindrambaiko fanarenana fako sy fisintomana rakitra iray hafa tena lehibe izay miahy ireo singa rehetra izay nahafahanao mamafa izany fanahy iniana na tsy nahy ary te hanana sitraka eny na eny ianao raha tsy misy fahasarotana lehibe. Ny Super Scan Recovery dia manao scanner tanteraka izay mahita ny fisie rehetra toy ny sary, sary ary horonan-tsary efa nofafanao taloha, mora, haingana ary tsotra.
Na izany aza, tsy vitan'izany ihany; vonona ihany koa izy hiatrika toe-javatra very tahirin-kevitra bebe kokoa ao anatin'izany ny fanavaozana ny telefaona, ny fianjeran'ny rafitra ary maro hafa.
Amin'ny ankapobeny, ny famerenana amin'ny laoniny ny rakitra dia haingana dia haingana, fa ny hafainganam-pandehany dia mety hisy fiantraikany amin'ny haben'ny fisie, mendrika hotadidina izany. Toy izany koa, fampiharana azo itokisana sy tena mahomby izy io, ary koa iray amin'ireo interface tsara indrindra.
Farany, izy dia iray amin'ireo rindranasa manana ny naoty tsara indrindra amin'ny Play Store iray manontolo, misy kintana 4.8 sy fisintona aman'hetsiny ana hetsiny.
Raha manohy manampy fampiharana fanarenana rakitra amin'ity lisitra ity dia tonga ny sitrana Sary voafafa, fitaovana iray ahafahanao mamerina sary sy sary tsy misy fahasarotana ary amin'ny fomba tsotra.
Raha efa nampiasa rindrambaiko fanodinam-bokatra isan-karazany sy fanarenana rakitra ianao ary tsy mandeha araka ny noeritreretinao azy ireo dia mety hahatratra ny antenainao izany satria afaka mamoaka ny sary rehetra voafafa tsy nahy na fanahy iniana taloha izy.
Ho fanampin'izay, manana maherin'ny 10 tapitrisa alaina izy, naoty kintana 4.0 tena tsara ary iray amin'ireo maivana indrindra amin'ny karazany, lanja izay tsy mahatratra 3 MB akory ao amin'ny Android Play Store. Tena mandaitra ary ny ankamaroan'ny hevitra voarainy dia manohana azy.
Mba hampitsaharana an'ity tongotra ity amin'ny tongotra ankavanana, ampahafantarinay anao ity fampiharana fanarenana horonan-tsary ity, ilay iray izay ahafahanao manome fiainana vaovao an'ireo horonan-tsary rehetra izay tsy anananao intsony, na satria nofafanao tsy nahy izy ireo na ninianao nofafana.
Miaraka amin'ny fahombiazan'ny 92%, ny scanner an'ity rindranasa ity dia hahita ny horonantsary nofafanao teo aloha. Ary raha sitrakao no ankasitrahanao dia hahazo 100% ianao amin'ny ankamaroan'ny tranga. Ka raha tena tianao ny mamerina sy mamerina ny horonan-tsary dia andramo ity fitaovana ity, izay maimaim-poana ary tsy mila fidirana amin'ny faka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana momba ny fako sy fisintomana rakitra 8 ho an'ny Android
Inona ary ary amin'ny fomba fiasan'ny Uber Eats?
Honor Band 6, fanadihadiana, toetra ary vidiny